» के रचना रिमाल फाईनलमा पुग्छिन् ?
के रचना रिमाल फाईनलमा पुग्छिन् ?
२३ चैत्र २०७६, आईतवार ११:५१
मकवानपुर, २३ चैत । नेपाल आईडल सिजन ३ को वाईल्ड कार्ड राउण्डमा प्रतिपस्पर्धा गरेकी रचना रिमाल नेपाल आईडल सिजन ३ को फाईनलमा पुग्ने चर्चा चलेको छ । सिजन ३ को उत्कृष्ट ४ जना छनौट भईसकेको अवस्थामा पनि यस अघि नै उत्कृष्ट १० भित्र परेर विभिन्न चरणमा बाहिरिएका ५ जना प्रतियोगीहरुले पून वाईल्ड कार्ड राउण्डमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । सोही क्रममा वाईल्डकार्डका लागि भिडेकी रचनाले पहिलो अवार्ड पनि जित्न सफल भएकी छिन् । गाला राउण्डको तेस्रो, चौथो र पाँचौँ हप्तामा गरी ३ पटक सर्वाधिक भोट प्राप्त गरेता पनि उनी उत्कृष्ट ८ सम्म पुगेर बाहिरिएकी थिईन् । ३ पटकसम्म सर्वाधिक भोट पाएकी रचना शोबाट बाहिरिएपछि धाँधली भएको भन्दै दर्शकहरुले नेपाल आईडल टिमको विषयमा नकरात्मक टिप्पणीहरु गरेका थिए । निर्णायकहरुले नै रचनालाई निकालेको भन्दै उनका समर्थक दर्शकहरुले कमेन्ट गरेका थिए । तर वाईल्ड कार्ड मार्फत उनी प्रतिस्पर्धामा फेरि जोडिएपछि भने रचनालाई फाईनलमा पुग्ने दाबेदारका रुपमा हेरिएको छ । हेर्नुहोस् भिडियो–
रचनालाई माया गर्ने दर्शकहरुको जमात पनि ठूलो भएका कारण आगामी राउण्डमा उनले सर्वाधिक भोट पाएर वाईल्ड कार्ड राउण्ड जित्दै फाईनलमा प्रवेश गर्ने भन्नेमा धेरै दर्शकहरुको कमेन्ट आएको छ । तर वाईल्ड कार्ड राउण्डमा उनीसँगै भिडेका मिग्मा लामा, मेघा श्रेष्ठ, किरण कुमार भुजेल र ममता गुरुङको पनि फ्यान फलोईङ बढी भएका कारण रचना सजिलै फाईनलमा पुग्न नसक्ने अरु दर्शकहरुको भनाई छ । यद्यपि वाईल्डकार्डका लागि निकै नै तयारी गरेर आएकी रचनाको प्रस्तुति पहिलेको तुलनामा सन्तोष जनक रहेको दर्शकहरुको कमेन्ट छ । उनले सोही प्रस्तुतिबाट ग्लामर मोमेन्ट अफ द विक अवार्ड जित्न सफल भएकी छिन् । उनले यसअघि सर्वाधिक भोट प्राप्त गरेता पनि अवार्ड भने जितेकी थिईनन् ।
झापाको भद्रपुर निवासी रचना रिमाल १७ वर्षकी छिन् । कक्षा ११ मा अध्ययनरत रचनाले सानो छँदा मन्दिरमा भजन गाउँदै गायन यात्रा सुरु गरेकी थिईन् । कक्षा ९ मा अध्ययन गर्दाको समयमा संगीतको कक्षामा भर्ना भए पनि उनले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकिनन् । उनको संगीत सिकाईको समय ४ महिनामा मात्र सिमित भयो । संगीतमै करियर बनाउने योजनामा रहेकी रचनालाई संगीतमा लगाव भएका कारण उनका आमाबुवाले समेत साथ दिएका छन् ।आदरणिय दर्शकविन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईको विचारमा नेपाल आईडन सिजन ३ को विजेता को बन्नेछ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।